Global Aawaj | कोभिड-१९ : रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउँने यि खानेकुरा आजै छोड्नुहोस् कोभिड-१९ : रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउँने यि खानेकुरा आजै छोड्नुहोस्
कोभिड-१९ : रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउँने यि खानेकुरा आजै छोड्नुहोस्
९ चैत्र २०७६ 10:33 am
कोरोना संक्रमणबाट धेरै बृद्ध बृद्धा, दिर्घ रोगीको बढी मृत्यु भएको भनिएको छ । तर विश्व स्वास्थ्य संघठनले भने कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बृद्ध बृद्धा मात्रै नभएर जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई लाग्ने बताएको छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएका ब्यक्तिमा कोभिड १९ को जोखिम अत्यन्त कम हुन्छ । त्यसको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानेकुरा प्रयोग गर्न डाक्टरहरुले सुझाव दिएका छन् ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढाउने?
– पोषिलो तथा सन्तुलित खाना नियमित खानुपर्छ।
– स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्नुपर्छ।
कुन–कुन खानेकुराले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ?
– हरियो सागसब्जी तथा तरकारी नियमित खानुपर्छ।
– अमिलो जातका फलफूलले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ।
– रातोभन्दा सेतो मासु स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हुन्छ।
– प्रोटिन र भिटामिन सी भएका खानेकुरा प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउने खानेकुराहरु :
मात्रा अत्यधिक हुने भएकाले यसले इन्सुलिनमा सुगर लेभल बढाउने गर्दछ जसले रोग इम्युनिटि पावर कमजोर बनाउँछ ।
यदि खाना बनाउन बार बार एकै प्रकारको तेल वा रिफाइन तेलको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो तपाईको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनसक्छ । यस प्रकारको तेलले मानिसको इम्यूनिटी पावर कमजोर बनाउँछ ।
अधिकांश शहरमा बस्ने मानिसहरु बजारको फास्टफूड खाने गर्दछन् । तर फास्टफुडमा सुगरको प्रयोग हुने तथा फाइबरको मात्रा कम हुने भएकाले यसको सेवन शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ । यसले पनि मानिसको इम्युनिटि शक्ति घटाउँछ ।
समयमा खानपान नगर्ने, शारीरीक ब्यायाम नगर्ने, हिडडुल गर्न नचाहाने मानिसमा पनि इम्युनिटि पावर कमजोर हुनसक्छ । अनावश्यक तनाव लिने, पर्याप्त निन्द्रा नपुग्ने तथा धुम्रपान र मद्यपान गर्नुहरुमा पनि इम्युनिटि पावर कमजोर हुन्छ । त्यसैले यस बिषयमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।-समयपोष्ट